Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka waxay ku faraxsan yihiin inay ku dhawaaqaan kuwa ku guuleysta abaalmarinta abaalmarinta bulshada ee degmada ee '2020-21 Prudential Spirit of Community'. Waxaa la sameeyay 1995, barnaamijka abaalmarinta bulshada ee 'Prudential Spirit of Community abaalmarinta' waa barnaamijka ugu weyn ee aqoonsiga ardayda dalka oo lagu sharfo adeegga bulshada ee iskaa wax u qabso ah.
Ava Chen, Josie Frandrup, Katherine Lew iyo Sarah Erickson ayaa loo magacaabay ku guuleystayaasha Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka, iyagoo helay shahaadooyin waxqabad. Waxay horey u sii socon doonaan si ay ugu matalaan Minnetonka tartanka heer gobol. Virginia Morrow iyo Phoebe Hanson ayaa loo magacaabay kaalinta labaad, iyagoo helay shahaadooyin mudnaan.
Kuwa qaata abaalmarinta abaalmarinta bulshada ee 'Prudential Spirit of Community' waxaa laga soo xulay kooxda dugsiga dhexe iyo ardayda dugsiga sare ee la siiyay Abaalmarinta Adeegga Tabaruca Madaxweynaha ee deyrta. Nidaamka xulashadu waa mid aad u tartan badan, oo magacyo badan ayaa soo qabtay door hoggaamineed iskaa wax u qabso sannado badan. Waxaan u hambalyeynayaa guuleystayaashayada iyo kuwa kaalinta labaad ka galay dadaalkiina iyo guulaha aad u wanaagsan. Waad ku mahadsantahay inaad ka dhigtay bulshadayada meel wanaagsan adoo u adeegaya wanaagga weyn!
Abaalmarinta kuwa ku guuleysta iyo kuwa ku soo baxa kaalinta labaad ayaa loo aqoonsan doonaa Khamiista, Janaayo 7 iyada oo qayb ka ah Barnaamijka Aqoonsiga Guddiga Iskuulka. Kala soco Shirka Guddiga Dugsiga tooska ah 6:25 pm si loogu dabaaldego oo wax badan looga barto Abaalmarinta Abaalmarinta Bulshada ee 'Prudential Spirit of Community.'
Ava Chen, Dugsiga Sare ee Minnetonka
Ava oo ay dhiirrigelisay rabitaanka dhiirrigelinta ka-mid ahaanshaha iyo taageerada ardayda beesheeda, Ava waxay u adeegtaa sidii Guddoomiyaha Xiriirka ee Guddiga La-talinta Dhallinyarada ee MyHealth Teen. Waxay sidoo kale u shaqeysaa sidii baraha asaagga barnaamijka 'Anchor Anchor' ee Dugsiga Sare ee Minnetonka. Xagaagan Ava wuxuu abuuray xero dood wadaag ah oo loogu talagalay ardayda ka tirsan bulshada Minnetonka. Hawlahan iyada ah waxay ku riyaaqday kaqeybgalka mashruucyo caawiya asxaabtooda.
Josie Frandrup, Dugsiga Sare ee Minnetonka
Josie wuxuu ahaa qoraa nolosheeda oo dhan. Fasalka sagaalaad, waxay kaqeybqaadatay mashruuc iskaa wax u qabso ah oo waraaqo loogu qorayo dadka waayeelka ah. Waxay ku dhiirrigelisay inay ka abuurto naadi Dugsiga Sare ee Minnetonka oo diiradda saara wacyigelintan qiimaha leh. Minnetonka Mail waxay ka kooban tahay in ka badan 20 xubnood oo waraaqo isweydaarsada dhowr jeer bishiiba dadka deggan xaafadaha waaweyn ee deegaanka. Josie wuxuu dareensan yahay inay tani tahay hab muhiim ah oo lagu muujiyo naxariis iyo u damqasho dadka kale. Iyada iyo xubnaheeda kale ee naadiga waxay xiriir la sameeyeen waayeelka si ay u qadarin doonaan noloshooda oo dhan.
Katherine Lew, Dugsiga Sare ee Minnetonka
Katherine waxay ahayd hogaamiye heersare ah Naadiga Midaysan ee Dugsiga Sare ee Minnetonka labadii sano ee lasoo dhaafay. Naadiga 'Unified Club' wuxuu u suurtogeliyaa ardayda naafada ah iyo kuwa aan naafada ahayn inay ka wada qayb galaan isboortiga iyo nashaadaadka kale Intaa waxaa sii dheer, Katherine waxay u adeegtaa Guddiga Ardayda ee Agaasimayaasha Ciyaaraha Olombikada Gaarka ah ee Minnesota. Ku dhiirigelinta shaqadeeda Naadiga Midaysan, Katherine waxay sidoo kale noqotay Kaaliyaha Daryeelka Shakhsiyeed ee dadka naafada ah.
Sarah waa xubin firfircoon oo ka tirsan Minnetonka Middle School West's West Club. Shaqada ay ka qabtay naadiga ayaa ku dhiirrigelisay iyada inay siyaabo kala duwan bulshada ugu celiso. Waxay uruurisay lacag si ay buugaag ugu iibsato Dugsiga Hoose ee Bruce Vento, waxay taageertay dadaallada gurmadka dab-damiska ee Australia, waxay ku heesatay guryaha dadka lagu xannaaneeyo, waxay ku tabaruceen Bulshada Bani'aadamnimada waxayna ku qaadatay ku dhowaad 70 saacadood sameynta maaskaro inta lagu jiro aafada. Waxqabadyadeeda adeeg, Saara waxay ku ogaatay sida wax u soo celinta ay uga faa'iideysatay kuwa ay u shaqaysay iyo nafteeda.
Virginia Morrow, Dugsiga Sare ee Minnetonka
Virginia waxay tabarucday ku dhowaad 500 saacadood sannadkan. Shaqadeeda iskaa wax u qabso waxay diiradda saartay boqortooyada madaniga ah, halkaasoo ay ka shaqeysay ololeyaal siyaasadeed, iyadoo dadka ku dhiirrigelisay inay la shaqeeyaan dowladdooda oo ay ku dhaqmaan xuquuqdooda inay wax doortaan. Shaqadeeda, Virginia waxay ku aqoonsatay muhiimada ay leedahay in dadku kaqeyb qaataan dawlada hoose, gobolka iyo qarankaba.
Phoebe Hanson, Dugsiga Sare ee Minnetonka
Phoebe waxay tabarucday 313 saacadood sannadkan. Waxay ka qabatay hawlo iskaa wax u qabso ah dhowr ah Dugsiga Sare ee Minnetonka, oo ay ku jirto ku simaha hogaamiyaha Naadiga Fidinta Haiti. Shaqada Phoebe waxay xoojisay hamigeeda dhismaha wacyiga arrimaha adduunka waxayna gacan ka geysatey iftiiminta saameynta koox koox ay ku yeelan karto mashaariic kumanaan mayl ka fog Minnetonka.